Internet လိုင်းမလို..ဖုန်းလိုင်းမလို Wifi Network မိရုံနဲ့ဖုန်းပြော Message ပို့လို့ရမယ့် APK လေးပါ ~ (IT) ကိုထိုက်
Android internet ချိတ်နည်းများ
Android Pattern lock
IT Ebook များ
Internet လိုင်းမလို..ဖုန်းလိုင်းမလို Wifi Network မိရုံနဲ့ဖုန်းပြော Message ပို့လို့ရမယ့် APK လေးပါ
4:59 AM Android No comments
မင်္ဂလာပါ ကျွန်တော် Myanmar IT Helper ပါခင်မျ..
အခုကျွန်တော်တင်ပေးမှာကတော့ wifi talkie ဆိုတဲ့ Android apk လေးပါ။သူကဘယ်လို အသုံးဝင်လဲပြောရရင် Zapya apk နဲ. ပုံစံတူပါတယ် ဒါပေမဲ့ သူက ဖိုင်တစ်ခုနဲ.တစ်ခု လွှဲပြောင်းတဲ့နေရာမှာ သုံးတာမဟုတ်ပါဘူး ဖုန်းပြောလို.ရမယ် မက်ဆေ့ ပို.လို.ရမယ်ဗျာ စာသင်ခန်းထဲမှာ ဖြစ်ဖြစ် အလုပ်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ် နီးနီးလေးနဲ. မက်ဆေ့ပို.နေရတဲ့ ကြူကြူစိန် ကိုကို မမ များအတွက် အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ် ဖုန်းဘေလ်မကုန်ပါဘူးအင်တာနက်မကုန်ပါဘူး (ကျွန်တော်ကြော်ငြာပေးတာပါ)
ဒါလေးကိုတော့ MMUG က ကိုမင်းမင်းဆီက မလာတာပါ။ပွားတာများသွားပြီထင်တယ်နော် ....ကဲစလိုက်ကြရအောင်
အသုံးပြုပုံအဆင့်ဆင့်ကို တက်နိုင်သလောက်နားလည်အောင်ပြောပြပေးပါမယ် လိုအပ်ချက်များရှိခဲ့ရင်လဲခွင့်လွှတ်ပေးကြဖို.ကြိုပြောထားပါရစေ နော်....
ဒီ apk လေးကို အသုံးပြုမဲ့ဖုန်းထဲကို အောက်မှာပေးထားတဲ့လင့်ကနေ ဒေါင်းပြီးအင်စတောလုပ်လိုက်ပါ ဆက်သွယ်ဖို.အတွက် ဖုန်းရဲ. setting>>portable Wlan hotspot ကိုအမှန်ခြစ်ပေးလိုက်ပါ။ရှင်းအောင်ပြောရရင်တော့ wifi ထောင်လိုက်ပေါ့ဗျာ မသိတဲ့လူတွေအတွက်သေချာရှင်းပြတာပါ။
အဲ့ဒီကမသွားခြင်ရင်လဲ အောက်က ပုံလေးအတိုင်းသွားလိုက်ပါ
wi-fi hotspot ဆိုတဲ့နေရာကနေသွားလို.ရပါတယ်
ပြီးသွားရင်တော့သူ.ကိုသွားချိတ်မဲ့ ဖုန်းကနေ Wlan ဖွင့်ပြီးရှာကြည်.လိုက်ပါ ဒီအဆင့်ကိုတော့လူတိုင်းလုပ်တက်မယ်လို.ထင်ပါတယ် ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ coffee ဆိုင်တွေမှာ အင်တာနက်သုံးသလို သူထောင်ထားတာကို ၀င်ချိတ်ယုံပဲ.....password ခံထားရင်တော့ထည်.ပေးပေါ့
ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့ အိုကေသွားပြီ နော် ဖုန်းနှစ်လုံး network ချိတ်ပြီးသွားပြီ......ဒီနေရာမှာပြောချင်တာက ဖုန်းနှစ်လုံးအတွက်ပဲရှင်းပြလို. နှစ်လုံးပဲသုံးလို.ရတာမဟုတ်ဘူးနော် 8 ယောက်လောက်အထိရှယ်သုံးလို.ရတယ်.... ပြီးတာနဲ.ဆော့ဝဲလ်လေး ဖွင့်လိုက်ဗျာ အောက်က ပုံလေးလိုဖုန်းအမျိုးအစားအလိုက်ပေါ်နေလိမ့်မယ်
အမျိုးအစားတွေတူနေလို.ရောကုန်မှာကြောက်ရင်လဲ အောက်မှာပြထားသလို setting ထဲမှာ နာမည်ပြန်ပြင်လိုက်ပေါ့
အားလုံးပြီးသွားရင်တော့ မက်ဆေ့လဲပို.လို.ရပါပြီ ကိုပို.ချင်တဲ့ ဖုန်းကို ထောက်ပြီး မက်ဆေ့ပို.ရုံပဲဗျာ
မက်ဆေ့ပို.လို.အားမရရင် ဖုန်းပါပြောလို.ရတယ် ဗျာ ခေါ်ချင်တဲ့ ဖုန်းမှာဖိလိုက် call ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက် ဖုန်းခေါ်နေလိမ့်မယ်
ခေါ်ထားပြီး ဖုန်းဝင်လာရင်တောင် ၀ိုင်ဖိုင်က ဆက်အလုပ်လုပ်နေတဲ့အတွက် ဖုန်းမကျသွားဘူးဗျာ လိုင်းအားကောင်းရင် သူဘယ်သူနဲ.ဖုန်းပြောနေလဲဆိုတာပါနားထောင်လို.ရသေးတယ် ဘယ်လောက်အဆင်ပြေမလဲ ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေပြေသုံးတက်သွားလောက်ပြီထင်တယ် အသံလဲ ကြည်လင်ပြတ်သားပါတယ် ....လိုချင်လာပြီဆိုရင်တော့အောက်ကပေးထားတဲ့လင့်မှာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။
(ထပ်ပြောမယ်နော် mpt ကိုလဲ လုပ်ကျွေးစရာမလိုဘူး အင်တာနက်လိုင်းလဲမကုန်ဘူး ချစ်သူနဲ.လဲအဆက်အသွယ်မပျက် ဘက်ထရီမကုန်မခြင်းသာကြူကြတောဗျာ) :)
Myanmar IT Helper
Download => Dropbox / Solidfiles
တစ်ခု ခု ရေးပေးခဲ.ပါ
Apple ID အမေရိကန် Account ဖွင့်နည်း
Apple ID အမေရိကန် account ဖွင့်နည်းပါ ကွန်ပြူတာ iTunes ကနေဖွင့်တဲ့နည်းပါ။ သိပြီးသား ဆရာကြီးတွေအတွက်မဟုတ်ပါဘူး မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ဖြစ်ပါ...
Android Mobile Phone များတွင် Internet ချိတ်နည်းများ
Android Mobile Phone များတွင် Internet ချိတ်နည်းများ 1.GSM Internet Setting ထည့်နည်း(for Android) Android V4.0.3 အထက်သုံးသူများ အတွက်...
ဖုန်း Bill မကုန် အောင် Internet အသုံးပြု နည်း slect ဆွဲပြီးတော. စာကိုဖတ်ပါ..
ကဲ အားလုံးပဲ ဒီတစ်ခါတော့ Facebook ထဲကကျွန်တော်ဘော်ဒါတစ်ယောက်ဆီကနေ ပိုက်ဆံမကုန်တဲ့ အင်တာနက်ဖုန်းသုံးနည်းကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ သိထားရ...
ူLOCK /UNLOCK လုပ်နည်းများ
Hard disk ထဲရှိ data များကိုဖွင့်ခွင့်မပေးဘဲပိတ်ထားမယ် တစ်ခါတစ်လေမှာကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာအရေးကြီးတဲ့ Data သို့မဟုတ် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချ...
Android Phone မှတစ်ဆင့် ထီပေါက်စဉ် တိုက်နိုင်မည့် APK ( Android Application )
Android Phone မှတစ်ဆင့် ထီပေါက်စဉ် တိုက်နိုင်မည့် APK ဖြစ်ပါတယ်.. ထီပေါက်စဉ် တိုက်သည့်အချိန် တွင် ဖုန်းတွင် Internet...
Huawei Network Unlock Code စာရင်းများ ကြော်ငြာခြင်း - 4
31.8.2013 ရက်နေ့ နေ့လည်2နာရီ 30 မိနစ် ( ၁၄း၃၀ )ထိ Unlock Code တောင်းထားသူများစာရင်း အပိုင်း ၄ ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. ခေါင်းစဉ်မပါလို...
Samsung Galaxy Ace Plus S7500 ကို Android 4.2.1 Jellybean တင်ရအောင် ဇော်ဇော်ထက်းအကိုပေါက်ရေ… သူများတွေတောင်းသလို ကျတော်လည်းတစ်ခုလေ...
Hacking Ebook Myanmar Version (7အုပ် ) မြန်မာလို
Hacking ကိုစိတ်ဝင်စားသူများအတွက်ပါ ...စာအုပ်များရေးသားပြီး ပြန်လည်မျှဝေပေးသော ညီအစ်ကိုများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် credit တော့မပေးတော့ပါ...
ဥပဒေစာအုပ်များ - အပိုင်း(၁) ကိုတိုး : ကိုပေါက်. ကျွန်တော့်ကို ဥပဒေ စာအုပ်လေးတင်ပေးပါလားဗျာ၊ အပြင်မှာ ၀ယ်ရတာ သိပ်ဈေးကြီးတယ်.. ရန...
Huawei C8813 လိုင်းပျောက်သွားရင်...
လိုအပ်တာတွေအောက်မှာဒေါင်းပါ C8813 Driver Unlock Tools OneKeyTools RootZip Network Discovery-0.3.4 ကျွန်တော်ပြောတဲ့နည်းနဲ့ လိုင်းပြ...
▼ September (116)
iPhone တွေအတွက် Lens Dial...
အသစ်ထွက် GO SMS Pro version 5.25 Apk
လာပါပီခင်ဗျာ....Windows Registry _____ အပိုင်း (၂)...
paypal အကောင့် အသစ်အလွယ်တစ်ကူ တည်ဆောက်ခြင်း
Click တစ်ချက်တည်းနဲ့ Root လုပ်လို့ရတဲ့ One Click R...
Pro Evolution Soccer 2014 (PES 2014) For Xp/Vista/...
Zapya v1.8.1 apk (Latest Version)
Your-freedom မှာaccount ဖွင့် ပြီး poxyအလွယ်ကျော်ြ...
CCleaner Professional & Business Edition v4.06 + P...
facebook လော့ကျတာနှင့်hack ခံရသောအကောင့် အားပြန်...
Version 4.1.2 တွေမှာ မြန်မာစာအမှန်ပေါ်အောင်ပြင်ပေးမ...
Sky netရုပ်သံတွေကို ဖုန်းထဲကနေ free ကြည့်မယ်(အားကစ...
ဒီဇိုင်းဆန်းနဲ့ 3D MAVEN Music Player Pro version ...
photoshop cs tools များအကြောင်း ( ebook )
Samsung Galaxy Note3Vs Samsung Galaxy Noet2Rev...
Nokia N8 & Belle Smartphone တွေအတွက် Free Language...
Android Users Guide စာအုပ် (မြန်မာလို)
အခြားသော Web Browser များထက် 550% ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီ...
Windows7& Ubuntu Dual Boot Configuration ( မြန်မ...
Youtube ဗီဒီယိုများ ဖုန်းနဲ့ဒေါင်းမယ်
ကွေးကောက်နိုင်သော မျက်နှာပြင်သုံး စမတ်ဖုန်း Samsun...
Service သမားများအတွက် Firmwares များ ပို့ပေးမည်..
ပိုက်ဆံပေးဝယ်ရတဲ့ 72 Top Paid Android Apps & Theme...
Samsung Galaxy Note3ကို အသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ခြင်း
ကွန်ပျူတာအတွက် အလွန်အသုံးဝင်သော Tool လေးတစ်ခု
Windows 8.1 Product Key Finder v13.09.6 (ဝင်းဒိုး ...
iOS7ဖုန်းများအတွက် သတိထားရန်
Animated Widget Contact Prov1.7.2 APK
Gmail Account ဖွင့်နည်း
Modern Combat 4: Zero Hour +data for Android v1.1....
ကြော်ငြာ Click ရင်းငွေရှာနေသူများအတွက် MyAdsClick ...
Dell Inspiron 14 3421 Drivers Free Download
Adobe Reader အသုံးပြုနည်းစာအုပ်လေးပါ.(မြန်မာလို)
မြန်မာပြည်မှာ ရောင်းတော့မယ့် Galaxy Note3က လူစိတ...
ခေါက်ပေး လိုက်ရုံနဲ့ အသုံးပြု နိုင်မယ့် ဖိနပ် Unif...
Virus အမျိုးမျိုးသတ်နည်းစာအုပ် (မြန်မာ Ebook)
Karbonn A12 Root
Call of Duty4Modern Warfare (PC Game)
Password တိုင်းအတွက် Encripta Password Manager 1.1...
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော Android USB Drivers များ
အခြားကွန်ပြူတာတလုံးကို လှမ်းထိမ်းချုပ်နိူင်တဲ့ SUP...
အကြီးစား အိမ်တွင်း သူခိုး
အင်တာနက် Bandwidth ကို 40 Gbps အထိ တိုးချဲ့မည်
သက်တမ်းလွန် ငွေဖြည့်ကတ်များ တစ်လအတွင်း ပြန်လဲပေးမည...
Pro Evolution Soccer 2014 (For PC)+ Crack
ကလစ် ၂ ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ ဖူးဗား ရှင်းဖြစ်တဲ့ IDM 6.1...
Symbian ဖုန်းတွေအတွက် media player Nonitmee MEDIA ...
Web Developer တွေအတွက် My SQL version 5.6.14
PC & Internet Speed ကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ Auslog...
Google ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်များ စာအုပ် (မြန်မာလို) (...
အများပြောပြောနေတဲ့ 3G NETWORK နဲ့ 4G NETWORK ဘာကွာ...
Facebook က Notifications တွေ Gmail ထဲ မဝင်အောင် ပိ...
အင်တာနက်မှာ အရိုးအရှင်းဆုံးငွေရှာနည်း( ၃)
Android ဖုန်းမှ Internet Connection ကို Share သုံး...
Android နဲ့ iOS အပေါ် User တွေ ဘယ်လောက်သစ္စာရှိကြလဲ?...
OS ပေါင်း 38မျိုးကို Activate လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Wind...
Android Users များအတွက် HiSuite v1.6.10.08 For And...
ကွန်ပျူတာဖြင့်ဖန်တီးမှုအနုပညာစာအုပ် (မြန်မာလို) (10...
Wise Care 365 Pro 2.81 Full Version
ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကို ကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်ခြင်းစာအုပ် ...
Android ရဲ့ System ပိုင်း color ကို စိတ်ကြိုက် cus...
iOS7& 7.0.1 ကို တိုက်ရိုက် ဒေါင်းကြမယ်
CISCO Router တွေမှာ Password တွေမေ့သွားရင် ဘယ်လိုလ...
Android ဖုန်းသုံး အိပ်မက်ကျမ်း
ခွေကူးလို့မရရင် ရအောင်လုပ်ပေးမဲ့ Wix-dvd- ripper
Root Explorer (File Manager) v3.1 APK
ကလစ် ၂ ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ဖူးဗားရှင်းဖြစ်တဲ့ IDM လာပြါ...
Wise PC 1stAid 1.21.44 Full Version (3MB )
ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထဲကလိုပဲကားမောင်းရမဲ့ Fast & Furiou...
SMS application တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ GO SMS Pro ver...
Battery အားတွေကိုထိန်းသိမ်းပေးမဲ့ Du Battery Saver...
စာရွက်မှာ ခဲခြစ်ထားတဲ့ပုံလေးတွေဖြစ်အောင် ဓါတ်ပုံရိ...
Android Phone ထဲက Data တွေကို Recover လုပ်ပေးမယ့် ...
Education (2) Dictionaries and thesaurus (အဘိဓါန်န...
ကလစ် ၂ ချက် နှိပ်ရုံနဲ့ ဖူးဘားရှင်းဖြစ်တဲ့ Pointst...
ဖုန်းကတ်ပျောက်၊ ကတ်ပျက်ကိစ္စရပ်များ၊ ငွေဖြည့်ကတ် ကိ...
Huawei ဖုန်းတွေမှာ Gtalk App မပါဘူးလား ?
ရေအောက် အင်တာနက် ဖိုက်ဘာကြိုး
မိုဘိုင်းဖုန်း သယ်ဆောင်အသုံးပြုနိုင်သည့် နိုင်ငံပေ...
ကိုယ့် ရဲ့wifi ကိုဘယ်သူတွေသုံးနေလဲ ?
HTML & CSS မြန်မာလို E-book
Error Repair Professional လေးအကြောင်း ( 1 MB )
Facebook ကိုမြန်ဆန်စွာသုံးနိုင်မယ့် Fast Pro for F...
ပိုက်ဆံပေးဝယ်ရတဲ့ 100 Top Paid Android Apps & Them...
android ဖုန်းတွေနှင့် pc မှာပါ အွန်လိုင်းကနေ smart...
Facebook ကို အလန်းဆုံး၊အမြန်ဆုံး၊နှင့် Function အစ...
Windows 8 GENUINE Permanent Activator Ultimate v16...
Internet လိုင်းမလို..ဖုန်းလိုင်းမလို Wifi Network ...
“BOOTMGR is Missing Press Ctrl + Del to restart" E...
လူတိုင်းအတွက် နှလုံးကျန်းမာရေး မြန်မာလို apk (4.4M...
အင်တာနက် sharing သုံးသူများအတွက် network ထဲကသူများ...
PC တွေ အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ AceByte Utilties ...
Nokia မိုဘိုင်းဖုန်းကုမ္မဏီကို Microsoft ပိုင်ပြီ
ဆရာသန်းထိုက် (ရွှေရိပ်) ရေးသားထားတဲ့ အသုံးချဗွီဒီယိ...
androids ဖုန်းတစ်လုံး၏ လျှို့ ဝှက်ချက်များ
Post အသစ်တင်တိုင်း Gmail ထဲသို့ပို့ပေးပါမည်။
Android Phone များအတွက် လျှို့ဝှက် ကုဒ်များ
မိုဘိုင်းဖုန်းတစ်လုံး၏ လျှို့ဝှက်ချက် ငါးခု
I phone firmware
HTC Root လုပ်နည်းများ
Samsung Root လုပ်နည်းများ
Huawei Root လုပ်နည်းများ
Drive Error ဖြေရှင်းနည်းများ
LOCK /UNLOCK လုပ်နည်းများ
Flash Drive Problem
MYANMAR FONT PROBLEM
internet and Email နင်.ပတ်သတ်တာတွေ
ဂျီမေးလ် အကောင့် ကို မြန်မာနိုင်ငံကနေဖွင့်လို့ရနေပါပြီ
နိုင်ငံခြားသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု FEC ငွေဖြည့်ကတ် မလိုတော့
(အဘိဓါန် နှင်. ဝေါဟာရပဒေသာ) (1)
1 Click MTK Flash Tool Firmware Creator (1)
A+ Ebook (1)
Adobe Indesign CS5 (1)
Adobe Photoshop CS3 Portable (1)
Analog Multimeter ဖြင့်တိုင်းတာနည်း (မြန်မာလို) (1)
Android Application ရေးသားနည်း (E-book) (1)
Android Battery (3)
Android Bussiness app (1)
Android Downloader (1)
Android facebook (15)
Android Font (5)
Android Game (30)
Android Hacking (1)
Android internet (8)
Android Pattern lock (6)
Android player (1)
Android Sexy (2)
Android Widget (2)
Android wifi (3)
Anti Spyware (1)
Antiuirus program (3)
ATM ကဒ်ဖြင့် ငွေထုတ်ယူနည်း (1)
Attacker အကြောင်းတစေ.စောင်း (3)
Backup Pro... (1)
C+မြန်မာလို Ebook (1)
Contacts APK (1)
CyberLink PowerDirector (1)
Dafault passwords အကြောင်း (1)
Dell Driver (1)
DJ Software (1)
Download ဆွဲနည်းများ (2)
Driver Booster (1)
Driver ပေါင်း တစ်သိန်း စုစည်းတင်ပြခြင်း (2)
Error ဖြေရှင်းနည်း (2)
Fifa World Cup Offical Songs.. (1)
Free Proxy Updates (1)
GSM နည်းပညာ (2)
Hacking Ebook (6)
Hacking Magazine (1)
Hacking software (3)
How to Create Android Application (1)
HTC Explorer သွင်းနည်း (1)
HTC One Root လုပ်နည်း (1)
HTML စာအုပ်(မြန်မာလို) (2)
Huawei ALL MTK SP FlashTools Firmware (38) ဖိုင် (1)
Huawei All-in-One Bootloader Unlocker v1.0 (1)
Huawei C8813 လိုင်းပျောက်သွားရင် (1)
Huawei C8816D Root (1)
Huawei G610-C00 Firmware (1)
Huawei ဖုန်းတွေ ကောင်းမကောင်း စစ်မယ် (1)
I phone (9)
IC များခွဲခြားလေ့လာခြင်း (1)
internet security ebook (1)
Internet နှင့် Website ဆိုသည်မှာ (4)
IOS image To CD>DVD (1)
IT စာအုပ် များ (2)
IT ဗဟုသုတ (32)
Java developerguide (မြန်မာလို) (1)
LENOVO ROOT လုပ်နည်းများ (1)
Memory Stick ၊ Flash Drive များနှင့် exe Virus (1)
Mobile Ebook (2)
Mobile Money (1)
MOBILE NEWS (20)
Mp3 သီချင်းများ (2)
MPT Service v1.1(BETA) (1)
Music Player (1)
Myanmar Android Apps (1)
Network ပိုင်းစိတ်ဝင်စားသူများအတွက် (4)
Networking စာအုပ်များ (5)
one click root (1)
paypal account သစ်ဖောက်နည်း (3)
pc & Internet Speed (2)
pc cleaner (1)
pc facebook (15)
PC GAME (4)
pc wifi (10)
Perfect Money အသုံးပြုနည်း (1)
phone sim unlock (1)
photoshop CS3အသုံးပြုနည်း စာအုပ် (1)
pink Music version (1)
Portable Software (1)
proxy facebook (1)
Recovery Software (1)
Root လုပ်နည်း Ebook (1)
Router နဲ.ပတ်သတ် တာလေးတွေ စုစည်းမူ. (2)
samsung galaxy unlock code (1)
samsung ဖုန်းတစ်လုံးကို လိုရာသုံးဖို့ အချိန်ရောက်ပီ (1)
SKYNET MPS တပ်ဆင်ခြင်း (1)
Sonny ဖုန်းတော်တော်များများ ကိုမြန်မာစာထည့် ချင်သူများ (1)
tips and trick (1)
uninstaller software (1)
vedio converter (3)
Virus သတ်နည်းစာအုပ် (2)
Web Design(မြန်မာလို စာအုပ်) (1)
Website Blog များကို Apk လုပ်နည်း (1)
WeChat App (1)
Window Os မကြောင်း (1)
Window Os အကြောင်း (2)
window phone facebook.XAP (1)
window registry (1)
Window Repair. (1)
Windows 8 Activator (4)
Y535-C00 Root & MM Font installe (1)
zapya apk (1)
ကွန်ပျူတာ ဗဟုသုတ (8)
ကွန်ပျူတာ နှင်. နည်းပညာ စာအုပ်များ (21)
စွယ်စုံ ကျမ်း (1)
နည်းပညာ သတင်း (43)
ဖိုင်လ်ဆိုက်ဒ်ကြီးကြီးတွေ အလွယ်တကူ ပို့ကြမယ် (1)
ဖုန်း screen (1)
ဖုန်း ဗဟုသုတ (15)
အင်္ဂလိပ်စကားပြော (၁၀၀၀) Ebook (1)
အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာနေသူများအတွက် (1)
အင်တာနက်မှာ ငွေရှာနည်း (4)
ကြော်ငြာ click ရင်းငွေရှာနေသူများ (2)
Copyright © (IT) ကိုထိုက် | Powered by Blogger